Hotel Projects International - Makhe Nature nge Shower yangaphandle
NgoLwesihlanu, Meyi 5, 2017 3: 21: 53 AM America / Los_Angeles
semvula OUTDOORsemvulaPlumbingekhaya ngcono
Ungathi kengoku ulindele ukufumana ishawa ngaphandle kwi wohambelwano kwi njengokhetho uhlaza zeCaribbean, kodwa kwikhaya lakho? Ngoba kutheni? Yiloo nto babonakala abanikazi ngakumbi nangakumbi ukuba esithi, njengoko inkosi bath uba kanti kwelinye igumbi endlwini apho abantu zivulela kancinci ukuba phandle enkulu.
Ukuze icace, thina akunazintlobano wayebhekisela kwabo iishawa ezimeleyo ngaphandle ukuba ngamanzi off emva kokuba uphume echibini. Thina uthetha imvula alfresco njenge ukwandiswa esisigxina ngaphandle lwe lokuhlambela yakho endlwini.
"Sichitha ixesha elininzi eneneni Internet, phambi kwe-TV okanye ikhompyutha, ifowuni, ezimotweni zethu, umtshato kwihlabathi zendalo, ukuba abantu basabela ngokwenene into efana ishawa phandle," utsho UEthan Fierro, a nomyili nomakhi kunye nombhali Ukuhlamba yangaphandle Hawaii-based. "It ikuvumela abo 10 ukuba imizuzu 15 ukudibanisa nendalo." "Kukho nto ngokuqinisekileyo ngasemva-to-uhlobo inkalo ibukeke kuyo yonke ngaphandle," imizuzwana Elizabeth Demetriades, a Lakeville, ngkhlknga., Ngokomakhi owenze impahla iiprojekthi kunye iishawa phandle.
"Le ishawa yangaphandle ngokuqinisekileyo yinxalenye mkhwa abantu bephethe ngaphandle kwi, ngoku abantu ukwakha izindlu zangasese yaphandle kwaye nkqu amakhitshi ngaphandle," utsho uDavide Buchanan, inqununu kunye uHorst Buchanan Architects e Jamaica Plain, Mass. Ngokuba client in Litchfield , ngkhlknga., Demetriades wayila isiphango walk-in buveze yaya ezulwini kwaye ufikelelo zombini zangasese eziphambili indlu kwakunye kwindawo yokuzonwabisa phandle.
Loo msebenzi ke ngumzekelo wendlela iishawa ngaphandle asingabo nje kuphela kwiimo-yezulu shushu ezifana California kunye Arizona. "Izigulana cela kwemvula yaphandle ezingachazwanga ngokuqhelekileyo bathiywe obandayo emoyeni," utsho Demetriades. "Le iishawa izinto ezisetyenziswa de kokuqala yovalo nemiyalelo yemozulu ekufunxeni imibhobho ukuba winterization -. Nakubaxumi sivame nemvulophu kule nkalo"
"Xa indlu saye eMzantsi Dartmouth, Mass.," Uthi Buchanan, "yinxalenye isikhalo akwazi ukuba uthathe ishawa ngaphandle eshushu kwimozulu ebandayo ngoko ukukhasa nangoko elukhukweni efudumeleyo."
Kodwa kukho imiba ethile kufuneka siyikhumbule xa sicinga hlambi bakho ngaphandle, nokuba uya kuba ukufaka omnye ngethuba yalungisa okanye ukuqala ukusuka ekuqaleni.
I-avareji ishawa yangaphandle ayifuni imidlalo ezikhethekileyo yaye akuyomfuneko ukuba zibize idenariyo ngaphezu i ngenayo, kodwa, ngokuxhomekeke kuyilo kunye neekhowudi basekuhlaleni, kusenokubakho imiba yamanzi ukuze ingqalelo. "Xa ashushu amanzi - wabopha isepha kunye ishampu - ziza kusetyenziswa, uqhagamshelwano inkqubo izilonda okanye owomileyo-kakuhle echulwe kakuhle umele," utsho Demetriades.
"Kufuneka ube nentlonelo lokusingqongileyo," wongeza Fierro. "Yaye ke amanzi angwevu kufuneka kuqokelelwa ngandlel 'ithile."
Wena awu yabucala iya kuba eyodwa, kodwa ke ayithethi enkulu inkxalabo njengoko kunokuba ucinga.
"Abathengi abaninzi asingabo bonke abachaphazelekayo ukuba obubobakhe," Demetriades uthi, "ingakumbi kwiindawo zasemaphandleni ngakumbi apho abamelwane hayi umba."
Buchanan uthi: "Ndiye yakhiwe kuphela imvula engaphandle kumakhaya yesibini, apho kukho ngokubanzi sikhululekile kwaye kukho abantu abambalwa ngeenxa Kodwa ke enye into xa uqubha phakathi ehlathini, yaye omnye xa uqubha a. setting suburban. "
Abaxhasi uNothozamile ngakumbi kwakunye nabo ukuze abamelwane nomsindo, Fierro ucebisa ukuba umntu obandakanya isisitheliso oluthile, kukhethwa into ngokugcina nokuphosa zendalo, ezifana bamboo okanye neepali izidiliya. "Kananjalo ufuna ukuthatha sightlines ingqalelo," utshilo. "Qinisekisa ukuba akukho nezakhiwo ngoyaba oko."
"Nayiphi na impahla enakho ukumelana isivunguvungu unako ukumelana i ishawa yangaphandle," uthi: Buchanan. "Ufuna into ixesha elide, ukuba ngokuqhelekileyo ukufumana phandle, okwelitye okanye umthi. Tile lukhetho ngokoqobo."
Fierro uyawuthanda ingcamango ngokusebenzisa wafumana izinto: "Thabatha into yaphela ubomi wayo njengoko injongo enye, niyinike ubomi obutsha," utshilo. "Yinto nje ngaphezulu iindleko, kodwa kudala omnye ngobumnandi. Plus, eyomileyo semvelo nto konke ngayo."
Njengayo nayiphi ishawa, uya kufuna ukubandakanya indawo yokugcina ishampu yakho, isepha kunye itawuli elomileyo. Kodwa qiniseka ukuba ukuba nesigqubuthelo ukuba ubakhusele iziqalelo. "A kwesitulo kunye umlobothi yokuxhoma ingubo yakho esifakwe ezintle, kakhulu," utsho Buchanan.
Kakade ke, lo njengomncedisi kujoliswe nje umbono.